Ezithakazelisa kakhulu okuvusa usinga American
Thriller futhi horror ziphoqa abantu ngoba okuyiyona ndlela ungakwazi ne impilo nokuphepha umzimba ukuze bakitaza imizwa yakho, uba nomuzwa wokuthi le ngenxa yokwesaba adrenaline futhi kanjani okwesabisa ngokwami. Nokho, akubona bonke othanda Russian, isibonelo, amafilimu noma e-Eshiya. Okuningi ethandwa okuvusa usinga American, horror kanye ifilimu ezingaqondakali.
E-United States kungaba ngempela ngiziqhayise ikhono lokwenza imiklamo eliphezulu. isithombe wawumuhle, umuhle kakhulu umsebenzi ikhamera ngokubhala iskripthi ... Nakhu ke - cinema American. Action, okuvusa usinga, ukwesaba, imfihlakalo, ubugebengu amadrama, abaseshi - yonke ukunambitha kuyoba into efanelekayo phakathi okunhlobonhlobo okuthile. Yiqiniso, akubona bonke American amafilimu-okuvusa usinga zinhle, kodwa sizocabangela emi kuphela amafilimu.
Amafilimu ne isiphetho esingalindelekile
Ngokuqinisekile kwenzeka izikhathi eziningi lo: kuqala, lonke umbukiso uzizwa uthuka kanye ukucindezeleka ngenxa izenzakalo ezenzeka esikrinini, bese abalobi kanye nabaqondisi Stukalo wena nhlobo ngesakhiwo ithuba, futhi nyá umphumela ezingalindelekile. Yini enye engcono? Yingakho nje ukubuka ama-movie - ukujabulela futhi umangale.
Ngakho, ngaphambi kokuba okuvusa usinga American, okuyinto ongabikezela ambalwa wokugcina. Abanye kubathatha eshiwo ngenhla isiphetho esingalindelekile, kanye nezinye - udidekile kuze kube muva nje, singavumeli umbukeli ukuze uqiniseke ukuthi ingabhekana kanjani uxoxa nabalingiswa abasemqoka: iqiniso ukuthi banecala noma umane yisisulu simo. Nazi ezinye lezo zithombe ukuthi bayakufanelekela uyakubona Kulokhu:
"Usuku April Fool BakaJehova."
"I Sixth Sense."
'Lucky Number Slevin'.
okuvusa usinga ngokwengqondo
Isibhakabhaka esasishubile ifilimu nokuningi - ngcono, okungenani uma kuziwa a Thriller. Kulesi isigaba becindezelwa ngokwengqondo basingatha esiphezulu futhi imininingwane nezingazi, ewa izingxenye zomzimba kanye izigcawu ugly abantu abaningi - ubuncane. Yiqiniso, kwezinye izithombe ezinyakazayo bayohlabela futhi ukulimala, namanye ama-movie horror esingokwemvelo izinto, kodwa kuyodingeka ukugxila hhayi kubo.
Ngokuvamile, uma ayathanda nokwethusa ngokwami, kodwa musa akhononde amabhayisikobho, ubuke ukuthi kunalokho ezingemnandi kuka ngesaba, ubungase ngesikhathi ngaphambi okungcono okuvusa usinga American esingezansi ka "ngokwengqondo".
Nangu yesibili ethandwa kakhulu ngemva American okuvusa usinga ngokwengqondo. Ngeke ukukholelwe ukuthi ebukhoneni ngamandla angaphezu kwemvelo nezidalwa, izidalwa futhi imihlaba, kodwa ukubukela izipoki, poltergeists, amademoni nezinye izidalwa otherworldly, kanye bantu abanovalo bayaya futhi abalwa imimoya emibi ezithakazelisayo. Futhi okubaluleke - ephephile, ngoba ukwahlulela yi amafilimu, imihlangano nge into kungaphezu eyeqisayo womuntu, ngokuvamile akugcini ezinhle.
Abaphikisi protagonists kuyoba amabutho ububi, womele igazi (noma cha) ezilo otherworldly, unamandla abantu lapho ngisho nokufa uqobo, okuyinto has a umuzwa engavamile amahlaya. Ezimweni eziningi, igazi amafilimu kancane, kodwa becindezelwa ngokwengqondo, cishe like esigabeni langaphambilini, zingaphezu kokwaneleyo. Vala izibani, vula i-movie ekhethiwe futhi ujabulele (esabe):
"Umuntu Omubi Ongokoqobo".
"I Skeleton Key."
okuvusa usinga olunegazi
Abanye abantu ezikuci- ezingokwengqondo, igazi labo Letha da inyama. Uma uwa ngesikhathi salokhu ... Awu, wena ngeke udumazeke. simo esishubile kuyinto izingxenye ezinkulu lwenkomo olufakwe amanzi bathinteka yomzimba, amehlo kunedwala eliyinqaba eliqoshwe, ukuhlushwa, nokubulawa, ukuhlushwa, kanye neminye imininingwane, okuzokwenza nezithameli lelungiselelwe. Asihambe!
"Mina ukumkhafulela ethuneni lakho."
"Wabona: Umdlalo sokusinda."
Kukhona phakathi abaqondisi izingcweti ngubani ngobuqili sihlanganise ezimbili okuphambene ngokuphelele Uma unganakile, uhlobo - horror kanye namahlaya. Eziningi zalezi amafilimu nabo bahlekise ngamabomu izitembu Thriller clichéd nokuningi like ukubayisigebengu, kodwa lena charm. Ngenxa yalokho, ukubuka lesi sendlalelo ifilimu kungaba zonke: nayizimfundamakhwela ubulala futhi ithini, kanye abalandeli eliphezulu amahlaya.
"Tucker & Dale vs. Evil".
Trilogy "Igazi Ice Cream":
"Shaun of the Dead";
Yiqiniso, cishe zonke okuvusa usinga American ziqukethe ezinye imfihlakalo futhi imfihlakalo. Ngaphandle nozungu ukubuka lezi movie boring. Nokho, lapha sinikeza isibonelo amafilimu lapho ingxenye umphenyi sivezwe ngokucacile kakhulu, futhi itulo kuyinto uphenyo kanye / noma ukucinga isigebengu (ngezinye izikhathi ezingaphezu kwesisodwa):
"Kanye Came Isicabucabu."
"Ukuthula we Amawundlu."
Kukhona isimo esifanayo esasinaye abaseshi. Thriller - kuhle, futhi uma buhlanjululwe gunfights cool, izigcawu okumangalisayo lokulwa zibabaza hhayi kuphela simo esishubile, kodwa futhi ukuzijabulisa - kuhle:
"Kusukela Ukuhlwa Till Dawn."
Grindhouse ifilimu uchungechunge:
Ngakho, laba babengamadodana engcono okuvusa usinga American. Mhlawumbe, ezinye zazo usulibonile, sezwa abanye, kodwa okungenani into ohlwini uzokwazi nakanjani priglyanotsya. amafilimu Abaningi baye ezingxenyeni eziningana - ifilimu, bathandile nesibalo esikhulu izibukeli, nakanjani siqhubeke. Kunoma ikuphi, kule mpelasonto noma kusihlwa uzoba nokuthile ukwenza ubone.
"Harry Potter": ukulandelana izingxenye
Victoria Tarasova, actress: Biography, Filmography, izindima umhlabeleli
Ifilimu namaSoviet "Siyakwamukela, noma Cha kwemvume": nabalingisi izindima
Filmography shah rukh khan. Indian umlingisi Shahrukh Khan
Sausage "Mahan" inyama yehashi: Izibuyekezo
"SaseNevsky Prospect" Gogol kuphindza acoce emfushane. "SaseNevsky Prospect": Amaqhawe
Izifundo zobuchwepheshe Map: izici imithetho
Ukuhlaziywa izinkondlo Bunin sika, "Kusihlwa" - ngobuciko zefilosofi isosha esihlatshelelwayo
Izidakamizwa "Derinat": ukubuyekeza nezincomo ukusetshenziswa
La Coruna, Spain: ulwazi, ezikhangayo futhi amaqiniso athakazelisayo